Thwebula TeamSpeak 3.5.2 futhi 3.05 Client – Vessoft
Ikhasi elisemthethweni: TeamSpeak
Amazwana ku TeamSpeak
TeamSpeak software ehlobene
I-Desktop Ehlanganisiwe – isoftware yokulanda nokulayisha amafayela kusetyenziso lokwabelana ngamafayela. Futhi, uhlelo lokusebenza livumela ukuphatha kalula amafayela wesitoreji samafu.
Lona ngingumhleli wombhalo osebenzayo ogcwele ngezinombolo zamathuluzi awusizo wokuhlela ikhodi yomthombo.
I-Freemake Audio Converter – ithuluzi elisebenzayo lokuguqula ngokushesha amafayela alalelwayo. Isoftware ikuvumela ukuthi uguqule amafayela ube amafomethi athandwayo futhi ukhiphe amathrekhi alalelwayo kuvidiyo.